သနပ်ခါးမေ: Look taller without ဒေါက်
Nice post and happy blog day!
မြတ်ကြည် August 31, 2014 at 11:14 PM
Happy Blog Day Ma Ma :)
Ma Tint August 31, 2014 at 4:50 PM
အမြဲတန်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ စီခြယ်လေ့ရှိတဲ့ ဘလော့တစ်ခု။ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရ ပို့စ်လေးဖတ်သွားတယ် မြတ်ကြည်လေးရေ။♥♥♥
မြတ်ကြည် August 31, 2014 at 11:15 PM
10Q T Tint :)
Thu August 31, 2014 at 8:47 PM
ခြေထောက်မလှတော့ ပိုပြီးလဲအဆင်ပြေတယ်။အရပ်က၅ပေ၆လောက်ဖြစ်ချင်တာ..၂လက်မလောက်လိုနေတာ ဘိုလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိ :P အဖြေတော့ရသွားပြီ။ :)
by the way ♥Happy Blog Day♥ နောက်တောင်ကျနေပြီ :P
မြတ်ကြည် August 31, 2014 at 11:43 PM
Happy Blog Day too Ah Thu :)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) September 1, 2014 at 2:55 AM
မြတ်ကြည် September 1, 2014 at 3:30 AM
Ashley Myat September 4, 2014 at 10:04 PM
မြတ်က နဂိုတည်းက ဒေါက်ဖိနပ်စီးလေ့မရှိတော့ အစ်မမြတ်ကြည်ရဲ့ နည်းလေးတွေက အသုံးဝင်မှာ အမှန်ပဲ
မြတ်ရဲ့ ဘလော့ခ်လေးကိုလည်း ညွှန်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်
အဲ့လို ဖော်ပြလိမ့်မယ်လို့ မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရှော့ခ်ရသွားတယ် အစ်မမြတ်ကြည်ရေ ...
မြတ်ကြည် September 6, 2014 at 6:50 AM
my pleasure, sis. :)